laacib » “Waa sidee nolosha Arsenal,” Xabi Alonso oo mid ka mid ah xiddigaha Arsenal ka wareystay xaalada Arsenal…(Miyuu doonayaa inuu ku soo biiro?)
“Waa sidee nolosha Arsenal,” Xabi Alonso oo mid ka mid ah xiddigaha Arsenal ka wareystay xaalada Arsenal…(Miyuu doonayaa inuu ku soo biiro?)
(Munich) 14 Jan 2016. Xabi Alonso ayaa daaha ka rogay inuu la xiriiro xiddiga qadka dhexe ee Arsenal Mikel Arteta wuxuuna qiray inuu doonayo inuu ogaado sida ay tahay nolosha Arsenal.
Labada laacibkii ayaa ku soo wada koray San Sebastian kahor inta uusan Arteta u dhaqaaqin laacibkii Barcelona markuu 15-jir ahaa halka Alonso uu isna ku biiray laacibkii Real Sociedad waxayna markii dambe isku qabteen ama isaga hor-yimaadeen kulan Derby Merseyside iyagoo u kala safan kooxaha Liverpool iyo Everton.
“Si dhow ayaan ula socdaa isaga maxaa yeelay weligeed xiriir ayaan lahayn, laga soo bilaabo markii uu Everton uga dhaqaaqay Arsenal,” Alonso ayaa sidaaa u sheegay bogga rasmiga Arsenal ee You Tube.
“Waxaan doonayaa inaan ogaado nolosha halkaa ee Arsenal, wuu ku raaxeysanayaa ilaa iminka.”.
Arteta ayaa isna aaminsan in Alonso uu tusaale u yahay da’yarta kubbada cagta.
“Waxaa sharaf ii ah inuu ka yimid isla magaaladaan ka imid. Wuxuu qaatay magacaa sidoo kale markii uu joogay Liverpool, Real Madrid iyo iminka Bayern Munich, meel kasta wuu ku guuleystay,” Ayuu yiri Arteta.
“Sida ay nafsadiisa uga go’an tahay, sida uu u dhaqmayo waxaan u maleynayaa inuu tusaale wacan u yahay canug kasta kaa oo isku dayaya inuu noqdo xirfadle kubbada cagta ah, bal eeg isaga isla markaana arag waxa aad dooneyso inaad sameyso si aad u gaarto heerkaas.”.
EEG QAAR KA MID AH SAWIRRO MUUJINAYA SAAXIIBTINIMADA DABA DHEERAATAY EE ALONSO IYO ARTETA: